Toerana hankalazana ny Taom-baovao 2015 | Vaovao momba ny dia
Manakaiky ny faran'ny 2015, fotoana hitantara ny zavatra tsara sy ny zavatra ratsy, ny fanapahan-kevitra ary ny drafitra an-jatony izay tiana hatao amin'ity taona 2016. Tianay rehetra ny manomboka ny taona amin'ny tongotra ankavanana, miaraka amin'izany fahatsapana izany ho tsara kokoa ny raharaha amin'ity taona ity, mety ho hafa ny zava-drehetra, ary izany no antony anoloranay hevitra ny toerana tsara indrindra hankalazana ny Taom-baovao 2015.
Ireo toerana ireo dia hamela anao hanana a faran'ny mahatalanjona sy hafa amin'ny faran'ny taona. Miaina ny iray amin'ireo zavatra niainana izay sarotra averina. Raha azontsika atao, dia angamba te hanandrana toerana iray isaky ny alin'ny taona vaovao ho an'ireo tonga izahay, fa raha toerana iray ihany no tokony hofidinao dia tandremo ny tolo-kevitra rehetra entinay, satria tena manentana ny fanahy.
4 Nosy Canary
Efa hitantsika daholo ny mahazatra baolina jiro midina ao amin'ny Times Square hanambara ny faran'ny taona amin'ny fahitalavitra. Fa inona no holazainao mba hankalazana azy mivantana sy mivantana. Azo antoka fa ho traikefa mahagaga sy tsy hay hadinoina io. Ity baolina ity dia nanisa ny segondra farany tamin'ny taona nanomboka tamin'ny taona 1907 tao amin'ny tanàna lehibe any New York. Ny Times Square dia feno olona an'arivony maro izay nanao fety nandritra ny adiny fito tamin'ny fampisehoana mozika sy fampisehoana olo-malaza izay nalefa tamin'ny fahitalavitra nanerana ny firenena. Ary farany, nisy ranonorana confetti nianjera tamin'izay nivory teo an-kianja mba hiaina fotoana manokana.
Rehefa nitsidika an'i Londres aho tato ho ato, dia sisa tavela tamin'ny fihaonana taminy tao anatin'ireny fotoana manokana ireny. Toerana manokana iray hafa hankalazana ny Taom-baovao ny renivohitra Anglisy. People mivory ao amin'ny faritry Big Ben, izay misy ny Parliamenta sy ny London London. Ny famantaranandro lehibe no hanome ny feon-kira farany, miaraka amin'ny hakantony mahazatra. Tsy azo atao ny tsy mamakivaky any ary raiki-pitia amin'ny feon-dakolosy tsara any amin'ny tanàna be olona toy izany, ka tena amporisihiko ianao. Ho fanampin'izany, mandritra ny tontolo andro sy ny alina dia misy ny Parade Taom-baovao, matso lehibe izay mamakivaky ny tanàna miaraka amin'ireo mpitendry, mpandihy ary seho. Misy ihany koa ny fotoana afomanga lehibe manoloana an'i Thames izay tsy tokony hohadinoina.
Toerana iray hafa hitako mahafinaritra, noho izany dia ho nofinofy ny manomboka ny taona amin'ity tanànan'ny Aostraliana ity. Ao amin'ny faritra seranan-tsambo efa nipetraka ora maromaro talohan'izay ny olona, ​​na an-tsambo na teny amin'ny faritry ny zaridaina, mba hankafy ny afomanga. Io no iray amin'ireo tanàna lehibe voalohany mankalaza ny Taom-baovao, ary azonao atao ihany koa ny mandany ny andro eny amin'ny morontsirak'i Bondi, satria tsara ny toetrandro any amin'izao fotoana izao.
Raha tsy te-hiala lavitra amin'ny trano isika dia manana foana ny fahazoana mankany amin'ny Nosy Canary, izay misy ny toetr'andro 20 degre amin'ny ririnina, ka afaka mandeha eny amoron-dranomasina mihitsy aza ianao. Hialana amin'ny hatsiaka amin'ny ririnina mandritra ny andro vitsivitsy isika ary tena ho akaiky. Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny maro dia manana fety amin'ny Taom-baovao izy ireo izay anoloran'izy ireo fankalazana sy dihy amin'ny fety, saingy ny hevitra tsara dia ny mandeha sy manana ny voaloboka any Plaza de España any Santa Cruz de Tenerife. Avy eo azonao atao ny manohy ny fety amin'ny klioba toy ny Papagayo Beach Club na Monkey Beach.
Te hankalaza ny Taom-baovao indroa ve ianao? Ao anaty Haparanda sy Tornio azo atao izany. Ireo tanàna Skandinavianina roa ireo dia misy iray any Failandy ary ny iray any Suède. Mampisaraka azy ireo amin'ny tetezana iray minitra vitsy monja, fa ny te hahafanta-javatra dia ao anatin'ny faritry ny fotoana samihafa izy ireo. Ny mponin'ny tanàna roa tonta, aorian'ny sakafo hariva, dia mankany amin'ny Plaza de la Victoria de Tornio hanao ny isa voalohany ary mankalaza ny fahatongavan'ny Taom-baovao. Fa avy eo dia nitodi-doha nankany Haparanda namakivaky ny tetezana izy ireo hankalazana indray. Farany dia nifarana tamin'ny bara sy klioban'ny tanàna ny fety.
Ao amin'ity tanàna Japoney ity dia misy fombafomba maro izay mifandray amin'ny Taom-baovao, ary izany dia hanana traikefa hafahafa sy mampanan-karena. Tokony hanao veloma ny taona hihinanana ny paty nentim-paharazana antsoina hoe toshikoshi-soba, izay tandindon'ny fanantenana hanana fiainana lava, fomba iray hanaovana io faniriana io. Ho fanampin'izany, olona maro no tonga any amin'ny tempoly, toa ny Meiji Jingu, hivavaka amin'ireo andriamanitra, haneno lakolosy na hisotro ny amazaki, izay mamy mamy matanjaka. Ny fanisana ny chime matetika dia ankalazaina amin'ny fiampitana malaza izay mivoaka foana rehefa miresaka momba ny tanàna, ny fiampitana mpandeha an-tongotra lehibe indrindra sy sarotra indrindra eto an-tany. Ary farany, nifarana tany amin'ny toeram-pialamboly sy trano fisotroana karaoke tao an-tanàna ny fety.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Toerana hankalazana ny Taom-baovao 2015
Chernobyl, iray andro ao amin'ny toby famokarana angovo nokleary (tapany I) - Fiomanana